Puntland Oo Sagaal iyo toban jirsatay, iyo Sooyalka Taariikheed !!W/ Q Cabdinuur Faarax Maxamuud | RBC Radio
Puntland Oo Sagaal iyo toban jirsatay, iyo Sooyalka Taariikheed !!W/ Q Cabdinuur Faarax Maxamuud
Posted on August 2, 2017 Maqaal, RBC, Wararka
Puntland Oo Sagaal iyo toban jirsatay, iyo Sooyalka Taariikheed !!!
Sagaal iyo toban sannadood ayey Puntland u dabbal degaysa, Puntland waxaa ka jirta nabad buuxda kala dambeyn, hormar dhanka tacliinta Ganacsiga iyo Dacwada diinta islamka waana guul Soomaali oo dhan dhaxal u ah.
Hannanka maamul wanaag waxay Puntland tusaale u tahay dhammaan Maamul Gobolleedyada Soomaaliya ka dhismay marka laga reebo Gobollada waqooyi Galbeed Soomaaliya oo ka dhismo horeyey Putland.
Dawlad Gobolleedka Puntland waxaa soo xukumay shan Madaxweyne, laga soo bilaabo Eebbe ha u naxariistee), Cabdullahi Yuusuf Axmad , Maxamad Cabdi Xaashi, Eebe ha u naxariistee )Genaral Maxamuud Muuse Xire (Cadde Muuse). Cabdiraxmaan Maxamad Maxamuud Faroole, iyo Madaxweynaha hada talada haya Cabdiweli Maxamad Cali (Gaas).
Soddon sanno , oo Ummadda Soomaaliyeed ay ku naloneyeen Dawladd, waxaa 1991, ka dhax qarxay Ummadda Soomaaliyeed burbur iyo daggaal sokeeye, tasoo ay hoggaanka u hayeen sarakiil darajo sarre ka gaaray Ciidankii Xogga Dalka Soomaaliya, iyo qabqablayaal Qabiil kutiirsa waxayna geysten gabbood iyo Daggaal birta la-iska aslay), biri ma geydo aya ladooxay. waxana lookala cararay Nin walba halkuu asal ahan kasoo jeeday Qog weliba wuxuu miciin iyo nabad biday degmadii uu asal ahan kasoo jeeday.
Caasimaddii Ummadda Soomaaliyeed ayaa noqotay goob daggaal, ayna isku haystan qabqablayaal qabiil iyo kooxo diimeedyo,
Caasimaddii labad ee Soomaaliya ayaa looga dhawaaqay Dawlad ka madax bannaan Muqdisho, kadib markii qeyb jamida Beelaha waqooyiga Soomaaliya ay isku tagen shirk kadhacay Burco 27dii April ilaa 5tii May 19991, 18 May 1999, taso lagu go’aamiyey, Dawlad loogu magac baxshay Jamhuuriyadda Somalind”Ila hadana- aan ictiraaf helin.
Tabayaaqadii 1997, kadib markii lagu guul daraystay shirkii (Qaahira) oo” ay isugu tageen 28 kamid ahaa Qabqablayaashii siyaasadda Soomaaliya kala jiidaneyey ayaa shirkii waxaa iska baxay Korneyl Cabdilahi Yuusuu Axmad f iyo AHUN Genaral Aadan Gabiyow kadib markii ay ka Biyo diideen qorshihii shirkasu uu kusocday.
Waxaa Mgaallooyinka Bosaaso Qardho Garoowe iyo Gaalkacayo qeyb kamida ka dhacay Bannan baxayo waweyn tasoo lagu diidan hannanka Shirka Qaahira.
Guddomiye ku xigeenkii kobaad ee Jabhadda Hubaysaneyd ee la-oran jiray Jabhadda Diimuqraadiga Badbaadinta Soomaaliyeed luuqada qaladna ku ah (Somali Salvation Democratic Front) (SSDF) Maxamad Afballaar ayaa yiri Gobollada waqooyoli Bari Soomaaliya waxay dhisanayan Mamul Gobolled Magaciisu yahay Puntland” xigasho taariikhdas xog oggaal Korneyl Cabdirisaaq Xasan Daa`uud (Darawiish).
Haddaba (Sebteembar)1997, ayaa Beelaha Puntland waxay isku yimadeen Gobolka Nugaal waxana halkas uga furmay shirkii ugu horyeyey ee lagu hindisayey dhismo Maamul Gobolleed. Soomaali raadis ah.
Shirkas “oo” uu kasoo qeyb galay Allaha u naxariistee Guddoomiyihii Jabhaddiis SSDF Cabdullahi Yuusuf oo ka yimid Qaahira wuxuuna ku bararujiyey bulshadii shirkaas in gogosha la ballaariyo lana doono Beelaha Sool Sanag iyo Buuhoodle si ay qeyb uga noqdan dhismo maamul Gobolleed, tasoo aad loo soo dhaweyey aakhirna dhab noqtay sodookale Galgaduud ayaa loogu baaqay inay ka soo qeyb galan dhismaha maamul Gobolleedka Puntland in kastoo aysan ka soo qeyb galin.
Waxa la iska dhex qabtay Guddigii qaban -qaabada oo shaqaynayay illaa 15/May/1998, oo ahayd malintii la furay shir Weynihii lagu dhisay Puntland. oo socday 15/05/1998, 23/07/1998 tasoo ahayd Habeenkii dorashada ee Madaxweyne iyo Madaxweyne ku xigeen Cabdilahi Yuusuuf iyo Maxamed Cabdi Xashi. 01/08/1998, (ayaa la caleemo saaray) , waana maalinta u asteysan dabbal dega Puntland Soomaaliya kuna beegan 01/8/2017. sagaal iyo toban sanno jir.
Puntland 2006, waxay ka badbaday isku day lagu damacsana inay la wareegan xukunkeeda Maxaakiimta Islamiga ee Muqdisho laga asaasay lana wareegay xiliga Amanka Muqdisho. Markale Puntland waxaa daggaal qarsoodiya kusoo qaaday (Alshabab) oo ah Urur hubaysan 2016 daggaalkas oo ka dhacay Garmaal ,Garacad iyo Suuj. Godobjiiran, Daggaladas waxay mujiyen in Puntland noqtay qeyb kamida Soomaaliya oo leh Ciidan iska filan hujunka Urur kasta oo kusoo duula.
Ugu dambeyntii Puntland waxay sannadkan ku dabbal degaysa iyadoon lahayn wasiirro kadib markii Gollahii xukumadda ay kalsoonidii kala noqden Golaha Wakiiladda Puntland welina laga sugayo Madaxweynaha Magacaabista Golle wasiirra.
Waxaa kale oo Garoowe ku shirsan dabbal deguna kusoo aaday Hoggaanka dhaqanka Puntland oo isku yimid kadib markii Beel kamida Beelaha Puntland wax ka dhistay ay Tabashooyin dhanka Golaha wakiiladda aysoo gudbiyeen ayna Gogol dhigten si loo qanciyo tabashadooda waxana lasoo jediyey in la furo Dastuurka Puntland si loo kordhiyo Gollaha wakiilada Puntland oo hada ka kooban 66, xubnood in kastoo siyaasiin diidmo ka muujiyen furi tanka Dastuurka PLND.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamad Cali uu ballan qaaday inuu Puntland garsiin dono doorsho ka madax bannan qaab, qabaa’iil, laguna bedeli dono in qof weliba codkiisa uu dhiiban dono 2019, waxayse u egtahay inaysan surta gal ahayn madaba ay muddo yar ka harsan tahay xiligii xilku uga’ ekaa Madaxweyne Gaas.
Hambalyo Dawlad Gobolleedka Puntland Soomaaliya